Akụkọ akụkọ moto Staba |
Maka ngwa ụlọ
Akụkọ akụkọ moto Staba
Kedu ihe kpatara arụmọrụ BLDC na -enweghị ike iru 100%? Kedu ihe kpatara Ultra High Efficiency BLDC Motor na -eji echekwa ike?
Kedu ihe kpatara arụmọrụ BLDC na -enweghị ike iru 100%? Kedu ihe kpatara Ultra High Efficiency BLDC Motor na -eji echekwa ike? Kedu ihe kpatara arụmọrụ BLDC Motor agaghị eru 100%? Site na ọnụ ọgụgụ dị n'okpuru, nnyefe ike moto nke BLDC dị ka ndị a: • Ike mbata P1 • mfu ígwè stator △ PFE1 • Stator ọla kọpa ...
Teknụzụ moto BLDC maka ndị na -ehicha ihe mkpofu mkpanaka
BLDC Motor Technology for Mobile Handheld Vacuum Cleaners 1. Ọnọdụ dị ugbu a nke ahịa mkpachapụ mkpanaka mkpanaka mkpanaka na -aga n'ihu na -aga n'ihu na -ebi ndụ ndụ ụmụ amaala nke oge a na iji nwayọọ nwayọọ na -agba ọsọ nke ndụ ndị obodo, ndị mmadụ n'oge a ...
Nnyocha Njikwa Ogo nke Nrụpụta moto
Nnyocha Njikwa Ogo nke Njirimara Nrụpụta moto nke teknụzụ moto A BLDC moto bụ usoro elektrọnik nke na -achọpụta mbufe na ntụgharị nke ume ọkụ eletrọnịkị. Ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere igwe nkịtị, ngwaahịa ahụ nwere otu isi ihe: igwe nrụpụta yiri ...
Etu ị ga -esi nye onye ahịa ahịa ụgbọ ala BLDC tozuru oke? Kedu ka usoro ahụ siri sie ike tupu ịhapụ ụlọ ọrụ ụgbọ ala Staba?
Etu ị ga -esi nye onye ahịa ahịa ụgbọ ala BLDC tozuru oke? Kedu ka usoro a si dị njọ tupu ịpụ Staba moto? Dị ka isi ihe na -emepụta akpaaka mmepụta ụlọ ọrụ, ntụkwasị obi nke ịdị mma moto na ọnụego ọdịda dara ada nke ukwuu bụ okwu dị mkpa nke ụlọ ọrụ na -akwụ ụgwọ ...
Afọ narị abụọ nke akụkọ mmepe nke igwe eletriki
Afọ narị afọ abụọ nke akụkọ ntolite nke igwe eletriki igwe eletriki igwe, nke bụ ihe anyị na -ekwu na ndụ anyị kwa ụbọchị, nwere ike malite na narị afọ nke 19. Mmalite nke igwe ihe na -esitekarị na nchọpụta iwu nke ntinye ọkụ eletrik na iwu nke ike ọkụ. Motors, ihe ...
Staba Motor na -achọ unu afọ ọhụrụ niile nke afọ 2021!
Ụkpụrụ nke Brushless DC (BLDC) moto na ụzọ ziri ezi nke iji
Ụkpụrụ nke Brushless DC (BLDC) moto na ụzọ ziri ezi iji mee ihe Mgbe ndị injinia chọrọ iji igwe eletriki na eletrọniki mee ihe n'ime ụwa n'ezie, ha ga -eche maka otu esi atụgharị akara eletriki ka ọ bụrụ "ike"? Onye na -eme ihe nkiri, ya bụ, moto, na -atụgharị ...
Mmepe nke ndị na -akwado uko ụlọ na ọdịnihu n'ahịa India
Ọrụ ODM na-elekwasị anya na akụrụngwa fan, akụkụ na ngwaahịa dị njikere iji-amalite site n'ahịa India na ebumnuche maka mgbasawanye mkpuchi mkpuchi ụlọ bụ isi ihe na-eme ka ụlọ dị jụụ na India. N'ịgbagharị na ọsọ nke 300-400 RPM, a na-eji ha ebugharị nnukwu ikuku na ezigbo ikuku ...
Mgbapụta DC na -enweghị ntụpọ na nkeji agụba maka ndị na -akwado ọkụ eletrik
site na nchịkwa na 19-01-01
Omume nke mbelata ike oriri yana ịbawanye arụmọrụ erutela n'ahịa onye na-akwado ọkụ eletrik. Staba Motor na-emepụta ngwaahịa na-enye aka na ndị na-akwado ọkụ eletrik pere mpe ma dị mfe nwere ọtụtụ ntọala na ụdịdị. Moto arụ ọrụ nke ọma, kọmpat na nke dị fechaa ...
Maka ajụjụ ọ bụla, ajụjụ ma ọ bụ ịja mma, biko kpọọ: 0086-137 9445 5099 ma ọ bụ dejupụta fọm a
BLDC Onye njikwa moto maka mgbatị ike, BLDC Onye njikwa moto maka ihe nhicha ntutu, Onye njikwa BLDC maka mgbatị ike, FOC BLDC Onye njikwa moto maka nhicha ihe nhicha, Onye njikwa FOC BLDC maka ike ọkụ, FOC BLDC Onye njikwa moto maka mgbatị ike, ase maka pricelist
Soro anyị nwee mmekọrịta